काले वन जर्मनी यात्रा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > काले वन जर्मनी यात्रा
पहिले नै अवगत ती लागि, कालो वन दक्षिण पश्चिम जर्मनी मा एक विशाल वन क्षेत्र हो. थप विशेष, यो बाडेन-Wurttemberg को राज्य मा स्थित र यो एक महत्वपूर्ण भाग ओगटेको गर्नुपर्छ.
यसबाहेक, क्षेत्र संग सिमाना छ फ्रान्स र स्विट्जरल्याण्ड, त्यसैले यसलाई साथै ती देशका पहुँच छ.
यस लेखमा, यो एक यात्रा लायक छ किन हामी बारेमा थप कुरा छौँ. सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हामी तपाईंलाई बताउन छौँ कसरी रेल द्वारा जर्मनी मा काला वन पुग्न.
क्षेत्र को सौन्दर्य
क्षेत्र को सौन्दर्य यसको प्रकृति मा निहित, तर पनि केही सुंदर सहर र गाउँमा. प्रकृति भाग लागि जाँदा, क्षेत्र छ, राम्रो, वन भरिएको. भाग आत्म-व्याख्यात्मक छ. तथापि, त्यहाँ धेरै बढी छ!
काला वन, वा Schwarzwald यो जर्मन भनिन्छ हुने, धेरै स्थानहरु छ सुन्दर मनोरम दृश्य. यो पनि भरिएको गर्नुपर्छ आश्चर्यजनक नदी घाटिहरुमा र घाम, भव्य चुचुराहरूको धेरै को पहाडहरू जुन तपाईं यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ.
यसबाहेक, त्यहाँ धेरै मानिसहरूलाई चासो हुन सक्छ कि गन्तव्यहरू प्रशस्त छन्. तपाईं शान्त परिवार पाउन सक्नुहुन्छ गन्तव्यहरू, जोडी retreats, र थप परिदृश्य भयानक adventurous मान्छे.
अरु के छ त, तिमी राम्री र कहानी-जस्तो सबै वर्ष लामो सम्पूर्ण क्षेत्र पाउनुहुन्छ! एक तथ्य हो यो जब यो प्रभावशाली देखिन्छ किनभने घाम, वर्षाको, र जब त्यहाँ हिउँ छ. तपाईं यसलाई स्पष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ क्षेत्र को सबै भन्दा तस्वीर.
कसरी ट्रेन गरेर काला वन हासिल गर्न
ट्रेन गरेर काला वन सम्म पुग्ने तपाईं थुप्रै तरिकामा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो. त्यो ज्यादातर किनभने क्षेत्रको स्थान र तालिम भन्ने तथ्यलाई को हो जर्मनी मार्फत यात्रा शानदार छ.
तथापि, सबै होइन. तपाईं युरोप को लगभग कुनै पनि भाग देखि क्षेत्र मा धेरै गन्तव्यहरू पुग्न सक्दैन. त्यो लागि विशेष गरी साँचो हो मुख्य सहरहरु फ्रान्स जस्तै देशहरूमा, स्विट्जरल्याण्ड, अस्ट्रिया, बेल्जियम, इटाली, र अरु धेरै.
जर्मनी लागि जाँदा, रेल यात्रा एक कम्पनीको रूपमा सजिलो बनाएको छ - Deutsche Bahn यसलाई संचालित. बिभिन्न ICE ट्रेनहरू, EuroCity, CityNight, सहरी, र TGV रेखाहरू क्षेत्र मा धेरै क्षेत्रमा तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ. तपाईं कार्लजूए एक रेल चल्न सक्छ, बाडेन-बाडेन, Freiburg, र Offenburg. यी रेलका सबै प्रमुख जर्मन शहर देखि जाने, त्यसैले रेल द्वारा काला वन गएर एक समीर हुनेछ.
जो तपाईं के गर्न निर्णय, तपाईं गलत छैन जानेछ, किनभने काला वन गएर एक जादुई हुन सक्छ अनुभव. तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हामी यो ज्यादातर भनिरहेका छन् सुंदर रेल र सम्पूर्ण क्षेत्र ट्राभर्स. तपाईं सबैभन्दा सुन्दर कुराहरू काला वन प्रस्ताव छ अनुभव हुनेछ. काला वन सुंदर लाइन मार्ग Offenburg-Konstanz मा संचालित.
OFFENBURG Freiburg गाडिहरु गर्न
श्टुटगार्ट Freiburg गाडिहरु गर्न
लिपजिग Freiburg गाडिहरु गर्न
नूर्नबर्ग Freiburg गाडिहरु गर्न
जब तपाईं चाहनुहुन्छ ट्रेन गरेर काला वन भ्रमण!
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, क्षेत्र को सौन्दर्य र रेल यात्रा को सुविधा यो यात्रा एक अद्भुत अनुभव बनाउन. हामी अत्यधिक तपाईं आफ्नो जीवन मा कम्तिमा एक पटक जर्मनी को सबै भन्दा जादुई क्षेत्र भ्रमण गर्न सल्लाह! तथापि, तपाईं काला वन प्रस्ताव छ सबै हेर्न को लागि कि यात्रा पर्याप्त लामो हुनुपर्छ!
तपाईं निर्णय गर्दा यो प्रस्ताव हामीलाई लाग्न गर्न, स्वतन्त्र महसुस सम्पर्क बचत एक ट्रेन. हामी तपाईंलाई रेल द्वारा काला वन भ्रमण मदत र साँच्चै अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त गर्न सक्छन्.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fblack-forest-by-train%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#कालो फोरस्ट #ब्ल्याकफोर्स्टगर्मेनी रेल रेल सुझावहरू रेल यात्रा रेल यात्रा